Dian-tantely " Journey-Assist - fitsangatsanganana fampakaram-bady
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Dia fitsidihana amin'ny tantely
Fitsangatsanganana tantely na tantely matetika dia midika fa fitsangatsanganana tantely. Ankoatr'izay, ny fitsangatsanganana toy izany dia mety ahitana ny fanambadiana any ivelany, miaraka amin'ny tantaram-pitondrana ao amin'io toerana io ihany. Taloha, ny mpivady vao nanao mariazy tany an-tanindrazany ihany. Ankehitriny, ny lanonana toy izany dia azo tanterahina mora foana na aiza na aiza amin'ny planeta. Ny fitsidihana ny fampakaram-bady dia aseho amin'ny fandaharam-potoana hieritreretana manokana.
Ny fitsangatsanganana tantely dia ahitana ny trano fandraisam-bahiny tantaram-pitiavana sy ny fandraisam-bahiny ho an'ny haingo manokana. Ho an'ny mpivady vao, karazana akanjo tsara tarehy (akanjo sy akanjo) ho an'ny fampakaram-bady dia afaka misafidy. Ahitana sakafo hariva eo amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina ny fandaharana fitsangatsanganana ho an'ny roa, isan-tsambo, fitsangatsanganana an-tsambo, sns. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia azo antoka fa manome sakafo maraina. Raha jerena ny fanirian'ny tena manokana ny mpivady manokana, dia misy ny lalana iray.
Na dia tsy asa mora aza ny fikarakarana mariazy any ivelany, dia mahavita mahita toerana mahafinaritra sy mifampiraharaha amin'ireo manampahefana any ivelany ireo mpandraharaha mpizahatany. Ankoatr'izay, ny orinasa dia mamorona tantara tantaram-pitiavana, mameno ny antontan-taratasy rehetra, manasa ny stylists, mpaka sary, mpanolotra, mieritreritra ny safidy mety amin'ny dia. Any amin'ny firenena samihafa, hotely maro no afaka manolotra efitrano manokana manokana ho an'ny mpivady vao.
Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny any Eropa dia midika fa manome champagne ao an-trano sy manaingo ny efitrano misy voninkazo. Any amin'ireo firenena atsinanana, alohan'ny mariazy, dia misy kapaoty manokana natao ho an'ny mpanambady sy mpivady.
Ny fandaminana tantaram-pitondran-tantely dia ahitana ny fametrahana ireo mpivady vao misy efitrano manokana sy fikarakarana fivoriana, fanasana amboara ary hetsika hafa ho azy ireo, izay alain'ireo mpaka sary za-draharaha sy / na mpandraharaha video. Misaotra an'izany, ny mpivady vao manana fahatsapana mahafinaritra indrindra, voatahiry ny fahatsiarovana tsara indrindra. Ny andraikitra lehibe amin'ny orinasa fitsangatsanganana dia ny manome ny mpanambady sy ny mpanambady izay rehetra tadiaviny. Matetika, ny mpivady vao maoderina dia tsy manaraka ny fomba nentim-paharazana amin'ny lanonana fampakaram-bady, manidina mankany amin'ny tany lavitra ary mikarakara fampakaram-bady araka ny fombafomba samihafa.
Araka izany, azontsika atao ny mamintina ireto fahasamihafana lehibe amin'ny tantely izao amin'ny mahazatra:
Misafidiana firenena iray izay ahitana sary sy mahafinaritra.
Marina tokoa ny ahiahy rehetra mifandraika amin'ny fikarakarana fialantsasatra ho an'ny mpivady vao miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana za-draharaha amin'ny orinasa fitsangatsanganana.
Safidy manokana fampiantranoana - ny trano fandraisam-bahiny romantika indrindra no voafantina, izay vonona handamina serivisy ho an'ny mpivady vao.
Karazana fitsangatsanganana am-panambadiana
Ireo orinasa fitsangatsanganana, mikarakara fitsangatsanganana an-tantely, dia manolotra ireo mpanjifa ireto manaraka ireto ho an'ny fitsangatsanganana mariazy:
Miaraka amin'ny fanambadiana ofisialy sy ny lanonana fampakaram-bady.
Miaraka amin'ny lanonana fampakaram-bady misy dikany tanteraka.
Amin'ny alàlan'ny toetrany dia mizara roa ny fampakaram-bady mandritra ny dia ofisialy и tsy ara-potoana. Ankehitriny dia misy lisitr'ireo firenena ahafahan'ny vahiny manambady. Ny lanonana fampakaram-bady tsy ara-potoana dia azo atao na aiza na aiza. Ny mpanjifany dia aleon'ny safidy fitsangatsanganana farany rehefa maniry ny hankalaza ny tsingerintaona mariazin'izy ireo. Matetika, ny mpivady vao fa tsy manambady ofisialy dia aleony fitsangatsanganana exotic sy tsy hay hadinoina! Ary io ihany koa dia manana ny sainy manokana!
Isan-taona dia mihamitombo ny isan'ireo mpivady te hisoratra anarana amin'ny fifandraisan'izy ireo mifanaraka amin'ny fomba nentim-paharazana ao amin'ny zoro tsy mahazatra amin'ny planeta. Maro ny mpivady no nandeha nandritra ny dia taorian'ny fampakaram-bady tany amin'ireo firenena eoropeana izay afaka mandalina fety mahaliana. Na izany aza, ny ankamaroany dia misafidy ny hisoratra anarana ny fifandraisany amin'ny fireneny, ny fitsangatsanganana any amin'ny firenen-kafa dia ho an'ny tantely fotsiny.
Toerana mamono tantely malaza
Mety ho an'ireo mitady fialan-tsasatra mitokana. Ireo dia nosy 1 izay ahafahanao mahita lagoons manga, torapasika fotsy fotsy, zavamaniry any ivelany. Ho an'ny fialan-tsasatra HARENA avo lenta, misy fepetra rehetra: milamina, mangina, natiora, manankarena anaty rano ary fauna, trano fandraisam-bahiny tsara indrindra. Ho an'ireo mpivady vao tena mitaky be dia be ny serivisy amin'ny fanoratana nosy iray manontolo. Noho izany dia afaka mandamina paradisa tena izy roa. Na izany aza, tsy voatery ny visa ho any Maldives. Azo jerena ny taona rehetra.
Ity no Lanitra ety an-tany! Toerana tsara hanaovana mariazy (re) tsy ara-potoana! Tena hafakely ity fampakaram-bady ity! Homena anarana Polineziana ianao, ary hisy ny fombafomba taloha izay hamehezana ny fikambananao folo! Afaka miaina amin'ny bungalow romantika mampino ianao miaraka amin'ny gorodona mangarahara, mijoro eo ambonin'ny vatan-tsambo eo ambonin'ny rano.
Izy io dia manintona ny mpivady tanora indrindra noho ny disko mahafinaritra sy ny endrika mahafinaritra. Mampiavaka ny trano fandraisam-bahiny amin'ny serivisy avo lenta, morontsiraka be dia be misy saina manga noho ny fahadiovany.
Ny fitsangatsanganana fampakaram-bady eto dia atao mavitrika manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Oktobra.
Fanjakana iray tena mahavariana manolotra fialamboly tena mpanjaka. Tena malaza amin'ny haran-dranomasina, tempolista bodista, zavamaniry miavaka, toeram-piompiana voankazo, valan-javaboary, fiantsenana ary tontolo iainana mahafinaritra. Ny fialan-tsasatra eto dia maro tokoa ka ny mpivady dia afaka mahita zavatra mety ho azy: Bangkok maoderina, club Pattaya, Samet exotic, morontsiraka Samui, ny morontsiraka mahafinaritra an'i Krabi.
Fotoana malaza amin'ny fitsangatsanganana mariazy dia manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa.
Paris... Ny tantaram-pitiavana indrindra amin'ireo renivohitra eto an-tany, izay manonofinofy amin'ny mpivady vao. Paradisa ho an'ireo tia. Ny hatsarana sy ny tantaram-pitiavana dia eo amin'ny rivotra eto. Ny vidin'ny fizahan-tany ho an'ny roa dia manomboka amin'ny 1 euro. Ny fitsangatsanganana dia misy mandritra ny taona.
Tantely afa-po ny vakansy romotra izay tsy hay hadino mandritra ny androm-piainany. Ny tontolo maoderina dia afaka manolotra toerana maro any an-danitra, toy ny hoe noforonina mamy. Noho ny fisafidianana tsara ny fizahan-tany, ny tompon'andraikitra vaovao dia mahita ny endriny vaovao amin'ny fifandraisan'izy ireo, mifanaraka amin'ny fiainam-pianakaviana ary mahazo fahatsapana tsy hay hadinoina.